Iingcebiso ngokucheba ngokugqibeleleyo (I) | Amadoda aQinisekileyo
Ngaphakathi kwenkqubo yethu yemihla ngemihla ifihla into engaziwayo sonke esicinga ukuba siyazi kakuhle: ukutsheva. Siza kuqokelela ezinye iingcebiso ezincinci ukuze ukwazi ukuphucula uchetyiwe kwaye uphephe iintshaba ukusika, amaqhakuva, iinwele ze-cysticUkucaphuka, njl.
Kwesi "sahluko" sokuqala, siza kuthetha malunga nokucheba kwangaphambili, okanye elo nqanaba lingenziwanga mntu ngaphandle kwalo sonke ekufuneka sikwenzile.
¿Leliphi elona xesha lilungileyo lokucheba? Ndiyathanda ukucheba kusasa nasemva kokuhlamba kakuhle ukuze ii-pores zivuleke kwaye zilungele "imfazwe" nangona besichazile eposini malunga nelona xesha lilungileyo lokucheba, ebusuku uya kuqinisekisa umphumo ongcono.
Sifanele senze ntoni ngaphambi kokucheba? Lungisa ulusu, njani ?, Ukucoca kakuhle nge isicoci sobuso kunye namanzi afudumeleyo, angaze ashushu nanjengoko esiyehla isikhumba kakhulu kwaye iya kusicaphukisa ngakumbi. Kwaye yome kancinci, ngaphandle kokuthambisa kwaye uphathe kakuhle ulusu, uya kuthintela nokuba ingacaphukisi.
Ukongeza, akukho nto. Nje ukuba sibe nesikhumba esicocekileyo, kufuneka sizivule kakuhle ii-pores kwaye kuthintele ukucaphuka okunokwenzeka kunye nokusika okungalindelekanga, iinwele ezingene ngaphakathi, kunye nokunye ukucaphuka okubangelwa kukucheba okungalunganga.
Ukwenza oku, ngaphambi kokuba siqhubeke nokucheba, kufuneka sisebenzise i-oyile elungileyo yangaphambi kokucheba ukulungiselela iindevu kwinkqubo eyoyikisayo eya kuyo. Sicebisa enye ye UAnthony Logistics (kunye Glycolic acid, Ukugqibelela kokucaphuka kunye nokunciphisa ukukhula kweendevu) okanye oko I-American Crew (ekhethekileyo yokutsheva ngencakuba) besiphawule ngaphambili.
Iibhleyisi ziyalucaphukisa kakhulu ulusu kwaye ukuba asizikhuseli kangangoko kunokwenzeka, sinokuzibona kwixesha eliphakathi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Chetyiwe » Iingcebiso ngokucheba ngokugqibeleleyo (I)
Molo bafana! Kuyabonakala ukuba amanqaku akho anomdla kakhulu, inyani lixesha lokuqala ndingena kweli phepha kwaye ndibambe ingqalelo yam. Phambi kokuba ndivuyisane nawe ngengcebiso yakho, ndinamathandabuzo, ndineminyaka engama-20 ubudala kwaye iindevu zam zikhula kancinci kodwa ndingathanda ukwazi indlela yokukhawulezisa le nkqubo, nokuba kukho nayiphi na imveliso okanye indlela yokwenza iindevu zikhanye kwaye ubukhulu. Ngaphandle kokuqhubeka okomzuzwana kwaye ndilindele impendulo yakho ndiyayibulela ingqwalaselo yakho. INgelosi
Molo Angel, enkosi !!
Ewe, akukho zikhawulezisi, ngokokwazi kwam, zikhona iimveliso ezinceda ukunciphisa ukukhula kweendevu, kodwa ingezizo ezokukhawulezisa.
Ewe, ndingathanda ukuthoba isantya sokukhula kweendevu kuba ingayekanga ukukhula ukusukela ndandineminyaka eli-14 ubudala, iye yabangqindilili, yabanzima kwaye ke kunzima ukuyiphatha nokuchetywa. Enkosi kakhulu kwangaphambili kwaye ndikhangele phambili ekuphenduleni okuhle. Indawo inomdla kakhulu. Konke okugqibelele.
Irhanisi zizi-slippers ezifashiniweyo